INingizimu idlala neNyakatho: indebe ye-Rainbow yebhola lombhoxo iyaqala | Scrolla Izindaba
INingizimu idlala neNyakatho: indebe ye-Rainbow yebhola lombhoxo iyaqala
Isimemezelo esenzeka ngoKhisimusi sasibukeka sisincane emoyeni, kepha ukundizela phezulu ukuya eBrithani nase-Ireland kungekudala kuzokwenzeka emaqenjini ebhola lombhoxo aseNingizimu Afrika.
Ama-Stormers, ama-Sharks, ama-Lions nama-Bulls azodlala kulokho okubizwa nge-The Rainbow Cup. Ngenkathi i-series ibingabizwa kalula ngokuthi yi-Top16, igama elisha libukeka lidumisa amafulegi amane aseNingizimu Afrika.
Umdlalo wokuqala uzoqala nje ngomhla ziyi-17 kuMbasa kanti owokugcina ungomhla ziyi-19 kuNhlangulana, kusasele amasonto ambalwa ngaphambi kokuthi ama-British nama-Irish Lions afike ogwini lwaseNingizimu Afrika.
Abanye abangaphakathi bathi ngisho i-Free State Cheetahs ne-EP Kings badlale kwi-Top 14 njengesilingo sokuhlola ukusebenza komqondo. Ngenkathi i-Cheetahs yenza kahle kakhulu futhi i-EP Kings enesibindi incipha, ngokuqinisekile kufakazela ukuthi ukundiza ukusuka eNingizimu uye eNyakatho ubuye futhi kwakungebuhlungu kangako kunokusuka e-East West kuya e-New Zealand, e-Australia nase-Argentina.
Ukwengeza kulokho iqiniso elivezwe yi-New Zealand, okokuqala ngaphansi kwetafula, kwabe sekusobala, ukuthi iNingizimu Afrika ibingasekho ezinhlelweni zayo zesikhathi esizayo, ikakhulukazi mayelana ne-Super Rugby. Eminyakeni eyishumi noma emibili edlule, ukuhlukana kubuzalwane bama-All Blacks namaBhokobhoko kwabonakala kungenakwenzeka, kepha manje, ngokubheka emuva, kubonakala sengathi bekungenakugwemeka. Imiqhudelwano ye-Rugby isacathama emathunzini kodwa ibukeka izolahlwa, uma kungenjalo ngokushesha, maduzane.
Ngesikhathi seNdebe Yomhlaba Yombhoxo, uRassie Erasmus wazibonakalisa engusomaqhinga ocabangayo owayehlale ebheke phambili. Manje sekuqubuke amahlebezi okuthi uRassie uqhakambisa i-The Rainbow Cup njengesitebhisi sokutholela amabhokobhoko indawo emqhudelwaneni weZizwe Eziyisithupha – indawo ezuzayo ye-Rugby Championship.